Dhiiga Madam Giselle - Wiilasha Jacaylka - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Dhiigga Marwo Giselle Celceliska 4.5 / 5 ka mid ah 10
N / A, waxay leedahay 50.3K views
Adult, Drama, Fantasy, Romance, Sigaar
Ruux caasinimo oo ku xayiran guurkeeda nin rabshad leh, Giselle waxay u horseedaa nolol murugo leh iyadoo ciyaareysa doorka haweeney jilicsan iyo marwo. Laakiin hal habeen, iyada oo ku meeraysanaysa gurigeeda cusub, Giselle waxay ogaatay wax u muuqda inuu yahay wiil yar oo ku xayiran qafis. Dhaxalka aabaha ninkeeda aabihiis, wiilka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bahal, ubax aan dhimanayn “ubax dhiig ku quudiya”. In kasta oo ay ka baqayso, Giselle waxay bilawdaa inay booqato wiilka habeenki. Kulamadan xaaraanta ah nolosha ma u burburin doonaan sida ay iyada ogtahay?
Cutubka 30 Waxaa laga yaabaa 18, 2021
Cutubka 29 Waxaa laga yaabaa 18, 2021
Duck Amiir (Kazao)